Col hortii jabay, waddaadada qaar Q.5aad(WQ: Axmed Cali Kaahin) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Col hortii jabay, waddaadada qaar Q.5aad(WQ: Axmed Cali Kaahin)
In dugsiyo iyo xarumo doodo dhaliya aas’aas’maan. Haddii doodo laga keeno qaabka qaabaynta manhajkooda ah mako lama dumin. Manhakju waa meelaha ugu muhiimsan qaranimada ee dal leeyahay siday u ee kaanayaan jiilka soo socda ee dalkan dhaxli doonaa.
Waa mid kamdia ubucda iyo waxqabdyada ugu waaweyn ee qaran keeno ama hirgaliyo ama ilaaliyo iyo sumada kala duwanaanta waddamada dunida waddada loo marayo horumar kastana bud dhigaale u ah.
Arrintaasi oo ah masiir doodiisa iyo xaliibintiisu lafa gur gun dheer iyo khubaro waddaniyiin kaliya ka biyo keeni karaan, oo waxbarasho la nool ama haw gabyo khubaro manaahijta iyo barbaarinta ahi kaliya ka biyo keeni karaan sidii u ee kaanayo jiilka mustaqabalka ee hogaamin doona dalkan iyo dadkan waana in uu ku qotamaa diinteena iyo dhaqankeena haddii kale dad iyo dal kala kaana soo bixi kara.
Kuwa dibada iyo khaarijka ka yimaado xaq baa loogu leeyahay dastuuriya in la mariyo shaandho dawladnimo iyo waayo aragnimo leh shuruucdeena iyo kor meerid iyo ku waajibin talaabooyin looga baahan yahay in shuruudo buuxiyaan wadana la isla ogyahayna loo jeexo oo la isla qaato laguna kormeero.
Shuruudahaasi waa dabar cid kasta oo gudaha iyo dibada shaqooyin sharciya ka fulinaysa buuxiyaan shuruudahaasi waa dabar u ah cid kastoo dalka timaada inagoo soo dhawaynayna martida maalgalinaysa. maalgalintuna laydhk baan ku raadinaynaa basle in la hubsado in dirxi ku hoos jiro maaha ceeb iyo ceebayn ee waa jib dastuuriya cid kasta waddaniyiin iyo ajaaniba la xisaabtankoodu.
Macalinku waa shaqsiga dhisa waddan dhan ama hoojiya waddan dhan sida sunaha nolosha taariikhed ku sugnaatay. Kala duwanaanta macalinka iyo ardayga dhaqankoodu waa mid dhugasho leh waayo saamaynta ugu wayn ardayga macalinkaa noloshiisa ku leh oo waalidka ka saamayn badan. Waxaana tusaale noola caruurta qurba jooga qaar
Macalinka ajanabiga ahi xaliibin ka badan ka waddaniga ah buu u baahan yahay waayo ardayda yaryar waa cajalad madhan oo wax kasta duubanaysa markaa kala duwanantaasi natiijo ka duwan dhaqankeena iyo diinteena in ay soo baxdo waa ina daan wayne haddaan laga lahayn dabar iyo xaliibid xikmadaysan oo ilbaxnimo sal u tahay.
Dunida haddii macalinka wanaagsani guulaysto waa guusah ugu wayn ee la gaadho waxaana tusaale nool ah dalka singabuur oo kaliya macalinka la maalgaliyay taasi singabuur halkaa gaysay.
Halka qaar kale oo iyaguna food saare kale ah ama awr kiraale kicin bulsho iyo dano siyaasadeed oo laga soo waariday kuwan wanaageena ku caarooda ee nolosheenu geeridooda u yaqaan. Waa nolol diidka kuwa maxaabiista u ah askarta afrikaanka. In ay ka dhigtaan badeecad xumaanta looga baayac mushtareeyaa waa weerar iyo ajendayaal la soo waariday oo loo diyaariyay sidii rayi caamka bulshadeena loo weerari lahaa wax yaabo kalena loogu shuban lahaa taasi oo ay kaabayso warbaahin cadaawad iyo ciil gun dheer oon bilaa sababi doonayaan in meel fog warkaasi gacan ku rimisku gaadho.
Maxaabiis taasi dus dus daciifnimo siyaasadeeday bilaabeen iyagoo isticmaalaya qaar laac raaca oo ladnaan mooday calyada laga soo dawaro waddamada dibira dhacsaday.
Hunguri wadkii ma arko halka midiyihii lagu qooli lahaa dul sudhan yihiin hankiisa hoose sida ku dacday marxuun qaldaan bay ku war heleen, qaar kalena iyagoo kab lulaaya, ka soo huleeleen.
Sida kuwii ku guumoobay ee hadda hawadooda iyo doodaheena ilabaxnimada sare leh ku raaxaysta iyo laaf yoodka taako kasta oo dalka kamida. Iyo deeqda Rabbi swt. Dad badan oo jibaysan hadhkana wali ka bixin ay u baahan yihiin dhawr wig oo siminaar soomaaliland jacayla iyo ka biyo keen hungayga yaala kuwa doonaya in dalkaaga hoojiyaan iyaguna ku badhaadhaan dhibaatadada adoon waxba galabsan kaliya waan noolaanayaa doorashadaydana haddii Rabbi swt idmo.
Waxa xiga qaybta 6aad